﻿ दक्षिण कोरियासँग उत्तर कोरियाका नेता किम जोङले किन मागे माफी ?
बिबिसि । उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले एउटा घटनामा व्यक्तिगत रूप दक्षिण कोरियासँग क्षमायाचना गरेको सोलले जनाएको छ। उत्तर कोरियाली नेताले बिरलै त्यसरी माफ माग्छन्।
किमले आफ्ना दक्षिण कोरियाली समकक्षी मुन जे–इनलाई एउटा पत्र पठाउँदै उत्तर कोरियाको जलसीमामा छिरेका दक्षिणका एक नागरिकलाई मारिएको लज्जाजनक घटना हुनु हुँदैनथ्यो भनेको बताइएको छ।
दुई देशबीचको सीमा कडा सुरक्षा व्यवस्था हुन्छ। उत्तर कोरियाले देशमा कोरोनाभाइरस प्रवेश गर्न नदिने उद्देश्यले गोली हानेर मार्ने नीति लागु गरेको अनुमान गरिएको छ।
किमले क्षमायाचना गर्दा के भने ?
ब्लू हाउसका अनुसार किमले त्यो घटनालाई ‘लज्जाजनक’ भन्दै मुन र दक्षिण कोरियाली जनताको चित्त दुखाएकोमा आफूलाई ‘धेरै दुःख’ लागेको उल्लेख गरेका छन्।
‘गोली हानेपछि सीमा उल्लङ्घन गरी आएका व्यक्तिलाई खोजीको क्रममा सैनिकहरूले भेट्न सकेनन् अनि रोग रोकथामका लागि लगाइएको राष्ट्रिय सङ्कटकालका उपायअन्तर्गत उनले बोकेको साधन जलाए,’ सुहले किमको पत्रलाई उद्धृत गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
उत्तर कोरियाको गस्ती टोलीले उनलाई मङ्गलबार दिउँसो ३ः३० बजेतिर आफ्नो जलसीमामा लाईफ ज्याकेट लगाएको तर थकित अवस्थामा फेला पारेको सोलको भनाइ छ।
ग्यास मास्क लगाएर उनलाई टाढैबाट सोधपुछ गरियो अनि ‘एक वरिष्ठ अधिकारीबाट’ उनलाई मृत्युदण्ड दिने आदेश आयो। उनलाई पानीमै गोली हानेर मारियो।
दक्षिण कोरियामा कस्तो प्रतिक्रिया ?
राष्ट्रपति मुनले उक्त घटना ‘स्तब्ध पार्ने’ खालको भएको र सहन नसकिने बताए।
‘प्रतिरोध नगरेको निरस्त्र नागरिकलाई त्यसरी गोली हानेको र शव जलाएको घटनालाई उत्तरले न्यायोचित ठहर गर्न नसकेको’ दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले बताएको छ।